Wararka - Sidee Bilawga Kalimba U Doortaan | GECKO
15 furaha kalimba
10 furaha kalimba
News Company Musical
Aaminaada Xogta Gudbinta
Sidee Billowga u doortaan Kalimba | GECKO
Kalimba, oo asal ahaan ka soo jeeda Afrika, waa aalad muusik oo soo saareysa heesaha iyadoo la adeegsanayo suulal khafiif ah oo jirkiisa ah suulka Sababtoo ah dhawaqiisu waa cad yahay oo waa laxan yahay, jidhku waa yar yahay oo si fudud loo qaado, waa fududahay in la isticmaalo. halkan, gecko kalimba jawaabaya su'aasha.
Kuwa ugu caansan waa 10 iyo 17 muhiim ah kalimba, laakiin 17 furayaasha kalimba waa ka hodansan yihiin oo ka xeel dheer yihiin 10 muhiim ah kalimba. 17 furayaasha kalimba cabirka wuxuu daboolayaa laba octaves oo heesaha ugu caansan ayaa la ciyaari karaa. runtii waad jeceshahay, laakiin maxaa yeelay ma ciyaari kartid biyaano 10-cod ah, xiisahaaga si weyn ayaa loo dhimi doonaa, waadna lumin doontaa dhiirrigelinta inaad waxbarto.
kalimba piano far
Nooca (Sanduuqa / Saxanka)
Biyaano nooca sanduuqa ah: oo leh sanduuqa codka, dhawaquna waa mid qaro weyn, iswareejin xoog leh, waxqabad dhexdhexaad ah iyo mid hooseeya ayaa xoog badan.Waxaa jira godad dhawaaqa xagga hore ama gadaal, oo sameyn kara dhawaqyo wah ah ama u noqon kara aaladda garaacista.
Banqin: Sida gabal dhan oo alwaax ah, dhawaqa ayaa ka dheelitiran uguna firfircoon, oo leh waxqabad xoog leh oo ku yaal aagga sare Jidhku wuu ka khafiifsan yahay nooca sanduuqa.
Nooca sanduuqa iyo nooca saxanka qin kaliya waxay leeyihiin dhawaq iyo dareen, ma jiraan dhibco wanaagsan ama xun, waxaan ku dooran karnaa hadba sida ay iyagu doorbidaan. Si aad u hesho dareen wanaagsan oo ku saabsan astaamaha codka labada biyaano, fiiri fiidiyowgan isbarbardhiga ah.
Farqi yar ayaa udhaxeeya qaababka kala duwan ee furaha suulka Qodobka muhiimka ah ee go'aamiya midabka dhawaaqa qalabka suulka waa jirka biyaano, oo sidoo kale saameeya qiimaha biyaano. Qalabka caadiga ahi waa acrylic acid iyo alwaax. qiima sare, alwaaxeeduna ku dhow yahay tan biyaano saxan, lehna cod hoose iyo miisaan culus. Xylophone waxaa loo qaybiyaa sandalwood cas, qori qudhac ah, alwaax mahogany, bamboo iyo wixii la mid ah. 4- Talo soo jeedinta qaabka
Faraha suulka waa mid fudud oo yar oo dad badani ay ugu khaldamaan alaab ay ku ciyaaraan halkii ay ka ahaan lahaayeen qalab muusiko ah Sameynta Qalabka Muusikada waxay u baahan tahay qalab tayo sare leh iyo shaqo, sameynta qalab qallafsan waxaa badanaa loogu yeeraa ul dab ah.
kalimba ugu fiican
Iibsiga shuclada si xoogan ayaa loo niyadjabay
1. Ololku wuxuu leeyahay fursad sare oo sheekeysi aan laga soo kaban karin.
2. badhamadu waxay dareemayaan wax xun, dabka gubanaya wuxuu kaa dhigayaa mid aad u xanuun badan, wuxuu si daran u saameyn doonaa xiisaha waxbarashada
Waxyaabaha kor ku xusan waxaa ku lifaaqan oo daabacay GECKO Kalimba.Haddii aad umuuqato inaad waxbadan ka ogtahay kalimba, raadi " gecko-kalimba.com "
Video for gecko kalimba ：
Warar dheeraad ah ka akhriso
1. Kalimba wuxuu ku fiican yahay 17 ama 21
© Copyright - 2017-2022: Dhamaan Reserved Rights.